Akwụkwọ nke Tim Hickle na Martech Zone |
Edemede site na Tim Hickle
Site nzụlite dị iche iche sitere na akụnụba na ihe ọchị, Tim Hickle achọtala ezigbo ụlọ na oghere ahịa dijitalụ. Taa, Tim bụ Digital Marketing Strategist maka Miles Design. Ebumnuche ya bụ inyere ụlọ ọrụ na-eto eto na-eto eto aka ịmepụta ndepụta nke onyinye ọrụ dijitalụ na nka ya, gụnyere ahịa inbound, nurturt email, na azụmahịa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijikọ, nweere onwe gị gbaa Tim ozi email na TimHickle@gmail.com ma ọ bụ jikọọ na Twitter @TimHickle
Nwere ike Snap Nzọụkwụ Na-esote Na njem Gị?
Tọzdee, Eprel 16, 2015 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Tim Hickle
N'ọtụtụ ụzọ, nke a dabere na onye onye ahịa gị bụ na ihe njem ha bụ. Onye ọ bụla maara banyere Snapchat n'oge a, nri? Onwere onye no na ochichiri na onye a? Ọ bụrụ otu a, lee ihe ị ga - achọ ịma… Ọ bụ otu n’ime netwọ mmekọrịta mmekọrịta ndị kacha ewu ewu n’etiti afọ 16 - 25, ọ bara uru ijeri $ 5, ma ọ dị gị ka ọ nweghị onye na - enweta ego na ya. Ugbu a, akụkụ nke